Ukhetha ukufaka kuselula, ithebhulethi noma ikhompyutha yakho isicelo "SitiGid", kodwa angazi ukuthi kuyini nokuthi ingabe uyafisa yini ke nhlobo ukulanda? Funda i-athikili yethu!
Okwamanje, bonke amadivayisi aphathwa ngesandla mobile anemisila esakhelwe module GPS-navigation. It ivumela ukuthi ucele kalula ukulandelela indawo yabo futhi uzulazule edolobheni ngokuphelele eziyinqaba kungabikho izinkinga. Nokho, ukusizakala kubo, kufanele ufake kudivayisi multimedia isicelo sakho ezifana "SitiGid".
Isebenza kuzo zonke izinguqulo zamuva of "Android" yesistimu yokusebenza. Futhi umise ngokwaso njengoba oluthembekayo, ewusizo, futhi okubaluleke - isicelo sasivumela sokusebenza. Ngokwemvelo, umbuto bese uyavuka: "Kuthiwani 'Android" setha "SitiGid" "Vele ufuna ukwenza caveat ezincane:? Kuyatuseka ukuthola ilayisensi lolu hlelo lokusebenza, bese zonke izibuyekezo okwalandela ohlelweni, uzothola khulula othomathikhi. Futhi kuyoba kufinyeleleke ezihlukahlukene ongakhetha khadi, ungase futhi thwebula mahhala.
Yiqiniso, uma ungafuni ukuchitha imali kwi ukuthengwa ilayisensi, World Wide Web, ungathola ongakhetha ngawo ungakwazi "SitiGid" ku "Android" setha i-DRM. Nokho, ngaleso sikhathi ubuyekeze uhlelo, futhi, kufanele bebodwa.
Ngakho njengoba ukusungula "SitiGid" ku "Android"? Cabanga Usebenzisa inguqulo ye-ilayisensi. Okokuqala nje, yebo, kufanele uthenge. Ngokulandelayo, endaweni ekhethekile udinga ukulanda ifayela ukufakwa, kodwa kudingeka kuqala faka ukhiye nge ilayisensi. Kufanele ulande inguqulo Android, njengoba umthetho, amafayela agcinwe ekhasini update.
Bese uya ngqo umbuzo kanjani "Android" setha "SitiGid". Ungenza lokhu ngezindlela ezimbili.
Sisebenzisa isimiso esikhethekile ukufakwa. Uma ungakabi insiza efakwe kusuka ku-Play Market, landa AppInstaller. Okulandelayo, xhuma ifoni kukhompyutha bese elingisa ku imemori khadi ukufakwa "SitiGid" ifayela.
Njengoba isicelo "SitiGid" hhayi esitolo lula, qiniseka ukuhlola ibhokisi ( "Izilungiselelo" - "Izinhlelo" - "Imithombo engaziwa") ukuvumela ukufaka.
Uhlelo ukufakwa (AppInstaller), thola isicelo "SitiGid" bese uchofoza "Qala ukusetha".
Kukhona enye indlela esingathola, njengoba "Android" setha "SitiGid". Ungasebenzisa isiphequluli ngqo. Lokhu kukhetha jikelele ngaphezulu.
Ekuqaleni, ufuna ukuvumela ukufaka izinhlelo zokusebenza ezivela kwimithombo engaziwa.
Okulandelayo ikopishelwe sokusabalalisa imemori khadi "SitiGid".
Faka e yekheli: okuqukethwe: //com.android.htmlfileprovider/sdcard/nazvanie ifayela ukufakwa. Bese uchofoza "Gijima."
Manje uhlala kuphela ukuqinisekisa ukufakwa.
It uhlala kuphela ukwenza kusebenze lolu hlelo. Ukuze wenze lokhu, run "SitiGid" bese ufaka ukhiye (ilayisensi). Manje ungalanda amabalazwe.
Ngakho, njengoba sibona, ekunqumeni ukuthi "Android" setha "SitiGid" akunandaba ngempela. Kodwa manje akesabi ukuvakashela noma iliphi idolobha ezingajwayelekile, ngoba isicelo ngeke akuvumele ulahleke, ukuhlinzeka ulwazi oluphelele kakhulu.
Medicine "Bepanten" (wamafutha). imfundo
Nomtholampilo wezilwane Petrozavodsk: kanjani ukukhetha okungcono?